Saraakiil Turki ah oo sheegay in Jamaal Khasugji lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sucuudiga - Halbeeg News
Saraakiil Turki ah oo sheegay in Jamaal Khasugji lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sucuudiga
ISTANBUL (HALBEEG)- Masuuliyiin u dhashay dalka Turkiga ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay baaritaan ku aadan Wariye Jamaal Khashogji oo la weysanaa maalmihii lasoo dhaafay.
Jamaal Khashogji oo ahaa maamulihii hore ee warbaahinta Al-Carabiya hadana wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ayaa la waayay talaadadii lasoo dhaafay kadib markii uu galay Qunsuliyadda Sucuudiga ee magaalada Istanbul.
Laba il oo ka warbixiyay maqnaansaha Jamaal Khashogji ayaa sheegay in Wariyaha lagu dhex dilay Qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul kadib markii uu halkaasi u aaday in uu sameysto waraaqadda la xiriira meherkiisa.
“Baaritaanada hordhaca ah ee ay sameeyeen booliska Turkiga ayaa sheegaya in Khashogji lagu dhex dilay gudaha Qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul, wax aan aaminsan ahay in kas loo dilay kadibna meydkiisa banaanka Qunsuliyadda la geeyay” ayey u sheegeen Saraakiil Turki ah wakaaladda wararka ee Reuters.
Suxufi Jamaal Khashogji ayaa si dibad-joog ah ugu noolaa dalka Mareykanka tan iyo sanadkii tagey markii mas’uuliyiinta Sacuudiga ay billaabeen inay aamusiyaan codadka mucaaradka.
Jamaal Khashogji ayaa aad u dhaliili jiray siyaasadda dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salman.
Madaxweynaha Somaliland iyo Harriett Baldwin oo Hargeysa ku kulmay
Madaxwaynaha oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirrada Faransiiska iyo Jarmalka